आइएमई लाइफद्वारा २.३७ अर्ब बीमाशुल्क आर्जन,जीवन बीमा कोषको आकार ७०%ले बढ्यो Beema Patrika
आइएमई लाइफद्वारा २.३७ अर्ब बीमाशुल्क आर्जन,जीवन बीमा कोषको आकार ७०%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा २ अर्ब ३७ करोड ९२ लाख ४ हजार ८७६ रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। यो रकम गत वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा २८.५२ प्रतिशतले धेरै हो। गत आ.वको तेस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले १ अर्ब ८५ करोड ११ लाख ७३ हजार ९०२ रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो।
यस्तै समिक्षा अवधिसम्म कम्पनीले लगानी कर्जा तथा अन्यबाट हुने आय बापत २५ करोड ८६ लाख १ हजार ६२२ रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। अघिल्लो वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा यो रकम १५ करोड १४ लाख ९५ हजार ९६१ रुपैयाँमा सीमित थियो। त्यस्तै समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ६२ करोड ४० लाख ३३४ रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो रकम ३४ करोड ११ लाख ३ हजार १३७ रुपैयाँ थियो।
समीक्षा अवधिमा कम्पनीले खुद नाफा बढाएको छ। तेस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म कम्पनी १० करोड १९ लाख ९६ हजार ७२८ रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिकोभन्दा १.८६ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १० करोड १ लाख ३३ हजार ०२२ रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा अवधिसम्ममा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको व्यवस्थापन खर्च बढेको छ।
कम्पनीको व्यवस्थापन खर्च ३६ करोड ७५ हजार रुपैयाँ छ। अघिल्लो वर्ष कम्पनीको व्यवस्थापन खर्च ३० करोड ५० लाख ८ हजार ६५६ रुपैयाँ थियो। त्यस्तै समीक्षा अवधिमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार बढेर ४ अर्ब २४ करोड ७२ लाख ६६ हजार ४२३ रुपैयाँ पुगेको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ७० प्रतिशतले बढी हो।
अघिल्लो वर्ष कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार २ अर्ब ४९ करोड ८३ लाख ६३ हजार ७५९ रुपैयाँमा सीमित थियो। अघिल्लो वर्ष ४५ करोड ५ लाख ९ हजार १७४ रुपैयाँको रहेको कम्पनीको जगेडा तथा कोषको आकार बढेर ६० करोड ८८ लाख ३९ हजार ८०० रुपैयाँको उचाइमा पुगेको छ। त्यस्तै समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले ५२ हजार ८९४ बीमालेख संख्या जारी गरेको छ।
कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी(इपिएस)९.७१ रुपैयाँ, प्रति सेयर नेटवर्थ १४७.८९ रुपैयाँ र प्रति सेयर सम्पत्तिको मूल्य ४५१.२७ रुपैयाँ रहेको छ ।
ime life insurance company ltd Q32078/79
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर संरचना परिवर्तन
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत
रिलायबल नेपाल लाइफद्वारा वार्षिक साधारण सभा आह्वान,यस्ता छन् मुख्य अजेन्डा
तीन जीवन बीमा कम्पनीबीच मर्जर सम्झौता, चुक्तापुँजीको आधारमा दोस्रो ठूलो कम्पनी बन्ने
प्राइम लाइफको बीमाशुल्क आर्जन १३.६८%ले बढ्यो, मुनाफाको अवस्था कस्तो ?
सूर्या लाइफको मुनाफामा ३८.४६%को गिरावट,अन्य सूचकको अवस्था कस्तो ?
परिसूचकमा दोहोरो अंकको गिरावट,बीमातर्फ प्रभु लाइफको सेयरमूल्य सर्वाधिक घट्यो
नेपाल इन्स्योरेन्सद्वारा वार्षिक साधारण सभा आह्वान,यस्ता छन् मुख्य अजेन्डा
नेप्सेमा ३० लाख कित्ता सेयर सूचीकृत
अब बीमा कम्पनीहरुले दुई स्वेदेशी पुनर्बीमकमा समान रुपमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने
छ्याङदी हाइड्रोपावरको सेयर रजिष्ट्रारमा बिओके क्यापिटल नियुक्त
नेपाल फाइनान्सको हकप्रदमा आजदेखि आवेदन दिन सकिने
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर जेठ १३ गतेदेखि लिलामीमा राखिने
राधि विद्युत कम्पनीद्वारा हकप्रद निष्कासनको अनुमति माग